Al-shabaab oo sheegatay weerarkii xalay lagu qaaday wasiir Maxamed Xasan Nuux – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Al-shabaab oo sheegatay weerarkii xalay lagu qaaday wasiir Maxamed Xasan Nuux
Iyadoo habeenkii xalay weerar Bambaano ah lagu qaaday gaari uu la socday wasiirka dhalinyaradda iyo isboortiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xasan Nuux, ayaa waxaa weerarkaasi sheegtay Xarakada Al-shabaab.
Xarakada Al-shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi ay iyaga ka dambeeyeen, islamarkaana uu si dirqi ah kaga baxsaday wasiir Maxamed Xasan Nuux, xilli uu wax ka gadanaayay goob laga dukaamaysto oo ku taalo wadada Maka Al-mukarama ee magaalada Muqdisho.
Weerarkaasi ayaa inta la xaqiijiyay waxaa ku dhaawacantay ilaa 3 qof oo shacab ah, kuwaas oo maraayay agagaarka goobta uu qaraxa ka dhacay, iyo sidoo kale mid ka mid ah ilaalada wasiirka.
Dhinaca kale, Xarakada Al-shabaab ayaa ku hanjabtay inay sii laba-jibaari doonaan weerarada iyo qaraxyadda ay la beegsadaan xubnaha la shaqeeya dowladda federaalka Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, habeenkii xalay ayay ahayd markii wasiirka dhalinyaradda iyo isboortiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya qarax Bambaano ah lagu weeraray gaari uu la socday, xilli uu wax ka gadanaayay goob laga dukaameysto oo ku taalo wadada Maka Al-mukarama ee magaalada Muqdisho, iyadoona wasiirka uu weerarkaasi ka bad-baaday balse uu dhaawac kasoo gaaray mid ka mid ah ilaaladiisa iyo 3 qof oo shacab ah.